နိူးထမှုတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာ | This is What Happens in Revival! | Real Conversion
စက်တင်ဘာလ ( ၂၁) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
ယခုတွင် သင်တို့ကျမ်းစာအုပ်တွင်ရှိသည့် တမန်တော် ၈း ၅ သို့လှန်စေလိုပါသည်။
“ဖိလိပ္ပုသည်လည်း၊ ရှမာရိမြို့သို့သွား၍ ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုဟော တော်မူသည်။” (တမန် ၈း ၅ )
“ထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည် အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။”(တမန် ၈း၈)
ရှမာရိမြို့တွင်ဖြစ်ပျက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကို ကျွန်ုပ်ချန်၍ထားခဲ့ ပါသည်။ သို့သော် ထိုအဖြစ်အပျက်မှာ ပင်္တေကုတ္တိနေ့၌ ယေရုရှလင်တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာ
နှင့်ဆင်တူယိုးမှားဖြစ်သည်ကိုမူ သတိချပ်ကြပေမည်။ ဖိလိပ္ပုက ခရစ်တော်အကြောင်းကို ဟောကြားခဲ့သည်။ သူ၏တရားဒေသနာဟောကြားချက်ကို လူတို့က စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ကြသည်။ များစွာတို့သည်လည်း ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက် ကြပါသည်။ “ထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည် အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။” (တမန် ၈း၈
ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာနှင့် ထပ်တူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပေတရုကလည်း “အသံကိုလွင့်၍” ခရစ်တော်အကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူ၏။ သူတို့ကလည်း “သူ၏စကား ကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြပြီး” ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ သူတို့သည် နေ့တိုင်း ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်မိဿဟာရကိုဖွဲ့ကြ၏။ တမန်တော်များသည်လည်း “သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထ မြောက်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်” ဟောကြားကြသောအခါ များစွာသောလူတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြပေသည်။ (တမန် ၄း ၂၊ ၄ ) ကျွန်ုပ်တို့သည် တမန်တော် ဝထ္ထုကိုဖတ်ရှုလေ့လာသောအခါ ပင်္တေကုတ္တိနေ့ကကဲ့သို့ ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပျက်သည်ကို တွေ့မြင်ရပေသည်။ ထို့ကြောင့် ပင်္တေကုတ္တိနေ့လိုအဖြစ်မျိုးသည် “ တစ်ကြိမ်တည်း”တွေ့ကြုံရ သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်က ပင်္တေကုတ္တိနေ့သည် အခြားသူများသွန်သင်ထားသကဲ့သို့ “အသင်းတော်၏မွေးနေ့” ဖြစ်သည်ဟုလည်းမယုံကြည်ပါ။ တပည့်တော်များနှင့် အခြားသူများ သည် ပင်္တေကုတ္တိနေ့မတိုင်မှီ ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ပင်္တေကုတ္တိနေ့ မတိုင်မှီအထက်ခန်းတွင် ဆုတောင်းနေကြသော တစ်ရာနှစ်ဆယ်သောလူတို့ကို “တပည့်တော် များ”နှင့် “ညီအစ်ကိုများ” ဟု တမန်တော် ၁း ၁၅ က ပင်္တေကုတ္တိနေ့မတိုင်မှီတွင် ခေါ်ဝေါ်သ မုတ်သည်။ ထိုလူစုသည် ပင်္တေကုတ္တိနေ့မတိုင်မှီ ဆယ်ရက်အလိုတွင် အသင်းတော်အနေဖြင့် အတူတကွစုရုံးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပင်္တေကုတ္တိနေ့ရောက်လာသောအခါ အသင်းတော် သည် ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ပင်္တေကုတ္တိနေ့သည် ယနေ့တွင် လူအချို့သွန်သင်ထား သကဲ့သို့ ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့မည့် “တစ်ကြိမ်တစ်ခါသာကြုံရမည့်အတွေ့အကြုံ”မဟုတ်ပါ။ ပင်္တေကုတ္တိနေ့၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်များသည် တမန်တော်ဝတ္ထုတစ်ခုလုံးနှင့် ခရစ်ယာန်သမိုင်းတွင် အကြိမ်ကြိမ်တွေ့မြင်ရပေသည်။
ပင်္တေကုတ္တိနေ့ပြီလျှင် အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်သနည်း။ Dr. Martyn Lloyd-Jones က ဤသို့ဆိုပေသည်။
အသင်းတော်ကသိရှိထားသည် ဘာသာတရား၏နိူးထမှုတိုင်းသည် ပင်္တေ ကုတ္တိနေ့တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပျက်သောအရာပင်ဖြစ်သည်မှာ အမှန်တရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ဘာသာရေးနိူးထမှုတိုင်းသည် ပင်္တေကုတ္တိနေ့ တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာကဲ့သို့သာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင်္တေကု တ္တိနေ့တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာသည် တစ်ကြိမ်တစ်ခါသာဖြစ်ပျက်သောအ ရာဟု ပြောဆိုခြင်းကို ရပ်တန်းကရပ်သင့်ပေသည်။ ထိုသို့မဖြစ်သင့်ပါ။ ၎င်းမှာ ပထမခြေလှမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, ၁၉၈၇၊ စာ-၁၉၉-၂၀၀ )
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အပြစ်ကိုဖော်ပြသောအခါ နိူးထမှုဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း ကနဦး တရားဒေသနာနှစ်ခုတွင် ကျွန်ုပြောဆိုခဲ့ပြီးပြီ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် အပြစ်သားများကို ခရစ်တော်ထံသို့ဆောင်သွားသောအခါ ( ယော ၁၆း၁၄၊၁၅ ) ခရစ်တော်သည် အပြစ်သားများထံ စစ်မှန်သောအသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်က ထိုအချင်းအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်တွင် တစ်လ တစ်ခါဖြစ်ပျက်သည်။ တစ်လတွင် တစ်ယောက်စီ ပြောင်းလဲလာသည်။ သို့ရာတွင် နိူးထမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ အချိန်တိုအတွင် လူပေါင်းများစွာပြောင်းလဲလာကြသည်။ Iain H. Murray က “ပင်္တေကုတ္တိနေ့မှစ၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို နည်းလမ်း နှစ်ခုဖြင့်တွေ့မြင်ရပြီး ပုံမှန်ပိုဖြစ်လေလေ၊ သာမာန်ပိုဆန်ပေသည်” ဟုဆိုသည်။ (Iain H. Murray, Pentecost Today?, The Biblical Basis for Understanding Revival, The Banner of Truth Trust, ၁၉၉၈၊ စာ- ၁၈ ) ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ “ပုံမှန်”လုပ်ငန်းကိုလေးငါးပတ်တွင် တစ်ယောက်စီပြောင်းလဲလာခြင်းတွင် တွေ့မြင်ရပေသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် နိူးထမှုကို ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသောအခါ “သာမှန်ထက်ပိုကဲ သော” လူများပြောင်းလဲလာပေမည်။ အချိန်တိုအတွင် လူဆယ်ယောက် ဆယ့်နှစ်ယောက် လောက်ပြောင်းလဲနိူင်ပေသည်။
နိူးထမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့က ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သောအချိန်၊ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းကို အားကြိုးမာန်တက်ဆောင်ရွက်သောအချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟူသော လူအချို့တို့၏မှတ် ချက်စကားအတွက် ကြောက်လှန့်နေမိသည်။ ဤအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စစ်ကြောသောအရာ ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ယင်းမှာ ဘုရားသခင်က နိူးထမှုကိုစေလွှတ်သောအချိန်တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်သောအရာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
သင်သည် ပင်္တေကုတ္တိတွင်ကျရောက်သောနိူးထမှုအကြောင်းကို စဉ်းစားလျှင် ထိုအ တွေးအခေါ်များသည် မှားယွင်းကြောင်းသိရှိနားလည်လာပေမည်။ စာတန်အကြံအစည်ဖြစ် ကြောင်းလည်းသိနိူင်ပါသည်။ ပျောက်ဆုံးသောသူများအား စာတန်ပြောဆိုသောစကားပင် မဟုတ်ပေဘူးလား။ ထိုသို့သောအကြံအစည်အတွေးအခေါ်များပေါ်လာအောင် စာတန်ဖန်တီး ထားခြင်ပင် မဟုတ်ပေဘူးလား။ သူက “ သင်သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လျှင် ယခုထက်ပင်သာ၍ခက်ခဲလိမ့်မည်၊ သင်သည် သာ၍အလုပ်လုပ်ရမည်၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အနားယူမှု များလည်း ရှိမည်မဟုတ်ပေ” ဟုဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် စာတန်သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြား သောသူသာဖြစ်သည်။ ထိုအရာနှင့်ဆန်ကျင်ဘက်သည်သာမှန်ပေသည်။ သင်သည် အမှန် တကယ်ပြောင်းလဲလာသောအခါ ယခုထက် သာ၍လွယ်ကူသောဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ပေမည်။ စာတန်သည် လှည့်စားသောသူသာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော ယေရှုက မုသားကိုမသုံးပေ။ ယေရှုသည် မှန်ကန်သောအရာကိုသာသွန်သင်သည်။ ထို့အပြင် ယေရှုက “ငါသည် ချမ်းသာ ပေးမည်” ( မဿဲ ၁၁း ၂၈ )၊ “သင်တို့စိတ်နှလုံးသည် သက်သာခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်” (မဿဲ ၁၁း ၂၉ ) ဟုဆိုထားသည်။ ထိုအရာကို မျှော်ကြည့်ကြပါစို့။ မဿဲ ၁၁း ၂၈-၂၉ ကိုကြည့်ကြပါစို့။ မတ်တပ်ရပ်ပြီဖတ်ကြပါစို့။ Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၁၀၁၁ ဖြစ်ပါသည်။
“ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါထံသို့လာကြလော့။ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။ ငါ့ထမ်းဘိုးကို တင်၍ထမ်းကြလော့။ ငါ့ထံ၌နည်းခံကြ လော့။ ငါသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသောစိတ်သဘောရှိ၏။သင်တို့စိတ်နှလုံး သည် သက်သာခြင်းကို ရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ထမ်းဘိုးသည် ထမ်းလွယ်၏။ ငါ့ဝန်လည်းပေါ့၏။” ( မဿဲ ၁၁း ၂၈-၃၀ )
သင်တို့အားလုံးထိုင်နိူင်ပါပြီ။ ယခုတွင် ဖော်တိန်တစ်ချောင်းယူပြီး အပိုဒ် ၂၈ ရှိ “ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်” ဟူသောစကားလုံးကို မျဉ်းသားပါ။ ယခုတွင် အပိုဒ် ၂၉ ရှိ “သင် တို့စိတ်နှလုံးသည် သက်သာခြင်းကိုရလိမ့်မည်” ဟူသောစကားလုံးကိုလည်းမျဉ်းသားပါ။ အပိုဒ် ၃၀ ရှိ “အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ထမ်းဘိုးသည် ထမ်းလွယ်၏။ ငါ့ဝန်လည်းပေါ့၏” စကားလုံးကို လည်းမျဉ်းသားပါ။
“ယခုတွင် အရမ်းအဆင်ပြေလွယ်ကူသွားပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်မ ဖြစ်ခဲ့လျှင်အရမ်းခက်ခဲလိမ့်မည်ဟု စဉ်းစားမိသည်။ ယခုတွင် ခရစ်တော်ကို မှီခိုယုံကြည်အား ထားသည် ဖြစ်၍ သက်သာရာရပေသည်။ ယေရှုကယ်တင်သောကြောင့် လွယ်ကူသောဘ၀ ကိုရရှိသည်” ဟူသော ယုံကြည်သူသစ်များ၏စကားသံကိုလည်း ကျွန်ုပ်ကြားဖူးပါသည်။ ထိုစဉ်းစားသမျှသည် ဓမ္မသီချင်းစာအုပ်ထဲမှဖြစ်သည်။ ထိုသီချင်းကို သင်တို့တွင် အချို့က သီဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် အသက်တာတွင်လက်တွေ့ကြုံတွေ့ခြင်းမရှိကြပေ။
(မြဲတည်ကျောက် ၊ Augustus M. Toplady ၁၇၄၀-၁၇၇၈ ရေးစပ်သည်။ )
( “ယခုလာပါ” Daniel W. Whittle ၁၈၄၀-၁၉၀၁ )
(ယေရှုခေါ်နေသည်၊ Fanny J. Crosby, ၁၈၂၀-၁၉၁၅ )
(“ယေရှုကျွန်ုပ်လာပြီ”၊ William T. Sleeper, ၁၈၁၉-၁၉၀၄ )
(“ယေရှုကိုမျှော်ကြည့်ပါ”၊ Helen H. Lemmel, ၁၈၆၃-၁၉၆၁ )
ထိုအံ့ဘွယ်တေးသီချင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကျွန်ုပ်သီဆိုချီးမွမ်းနိူင်ပါသည်။
(“ပျော်ရွှင်ရာနေ့”၊ Philip Doddridge, ၁၇၀၂-၁၇၅၁ )
မာရ်နတ်က ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရန်မှာ ခက်ခဲပြီးအကျိုးမရှိဟု သင့်အားဆိုပေမည်။ သို့ရာတွင် ဓမ္မသီချင်းများက ပျော်ရွှင်ရာနေ့ရက်ဟုသာဆိုပါသည်။ ယေရှုကလည်း “ငါသည် ချမ်းသာ ပေးမည်။အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ထမ်းဘိုးသည် ထမ်းလွယ်၏။ ငါ့ဝန်လည်းပေါ့၏။” ဟုဆိုထား ပါသည်။ ( မဿဲ ၁၁း ၂၈၊ ၃၀ )
ထို့အပြင် ၎င်းမှာ နိူးထမှုဖြစ်ပေါ်လာသောအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာပင်ဖြစ်ပါ သည်။ “ထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည် အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။”(တမန် ၈း၈) ယင်းမှာ ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ Dr. Lloyd-Jones က “နိူးထမှုတိုင်း….. ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ပြောဆိုသည်မှာ ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာ၏ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်ပျက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (Revival, ထပ်၍၊ စာ- ၁၉၉-၂၀၀) သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားရမည်မှာ ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာသည် နိူးထမှုတွင်ဖြစ်ပျက် သောအဓိကအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင်္တေကုတ္တိနေ့အကြောင်းကို စဉ်းစားသော အခါတွင် နိူးထမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသောအရာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသောအရာကို သိရှိလာပေမည်။
ရှင်ပေတရုသည် ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင် မတ်တပ်ထလျက် ယောလကျမ်းစာကို ကိုးကား ပြောဆိုလေသည်။
“လူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်းမည်……. ထိုကာလ၌ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သို့ ငါ၏ ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်း၍၊ သူတို့သည် ပရောဖက်ဥာဏ်နှင့် ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။” ( တမန်တော် ၂း ၁၇၊၁၈ )
ဘုရားသခင်သည် နိူးထမှုတွင် ၎င်း၏ဝိညာဉ်တော်ကို သွန်းလောင်းတော်မူသည်။ သူက “ထိုကာလတွင် ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကို ငါသွန်းလောင်းမည်” ဟုမိန့်တော်မူသည်။ ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်သမ္မာကျမ်းများက “၏” ဟူသောစကားလုံးကို ချန်လှစ်ထားခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် ဂရိမူရင်းတွင်ရှိသည်။ ယင်းကို ဂရိမူရင်းတွင် အပို (apó) ဖြစ်သည်။ Geneva ကျမ်းစာဟောင်းတွင်လည်း “ငါ၏ဝိညာဉ်” ဟု ပါရှိသည်။ King James ကျမ်းစာတွင်လည်း “ငါ၏ဝိညာဉ်” ဟူ၍ပါရှိသည်။ သို့ရာတွင် NASV တစ်ခုတည်းတွင်သာ ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်သဘောဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းကြောင့် ထိုကျမ်းစာအုပ်ကို ကျွန်ုပ်အသုံးမပြုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သောကြောင့်သာ King James ကျမ်းစာအုပ်၊ Scofield စာအုပ်များကို အသုံးပြုရန် အကြံပေးထားသည်။ ထိုကျမ်းစာအုပ်ကို သင်အားကိုးအသုံးပြုနိူင်ပါသည်။ ဘာသာပြန်ဟောင်းများက စကားလုံး သို့မဟုတ် တူညီသော စလုံးများကို ချန်လှစ်ထားခြင်းလုံးဝမပြုပါ။ “ထိုကာလ၌ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောယော က်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကို ငါသွန်းလောင်းမည်။” လီဗရယ်အသိုင်းအဝိုင်းများ က ထိုအရာကို “Septuagint” များဟုခေါ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်က “အဓိပ္ပါယ်မရှိသောစကား” ဟုခေါ်သည်။ ယင်းမှာ ဓမ္မသစ် ဂရိမူရင်းတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ထည့်သွင်းထားရ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် သူသည် မုသားကို သုံးထားခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် မူရင်းပညတ္တိကျမ်းများကို ကိုးကားသောအခါ ဂရိစကားလုံးများကို ဓမ္မသစ် မှုတ်သွင်းခြင်းအားဖြင့် “မှုတ်သွင်းတော်မူ”သည်။ “ငါ၏ဝိညာဉ်”။ အဘယ့်ကြောင့် အရေးကြီး ပါသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့်ဟု ကျွန်ုပ်ဆိုခဲ့သနည်း။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဝိညာဉ်အားလုံးကို သွန်းလောင်းခဲ့သည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာကိုသာသွန်းလောင်းပါသည်။ ၁၈၈၂တွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သော George Smeaton က “ယောက်ျားများကိုပေးထား သည်အတိုင်းအတာနှင့် မူလဇစ်မြစ်၏အကန့်အသတ်မဲ့ပြည့်စုံခြင်းတို့၏ခြားနားမှုကို ခွဲခြမ်း သောအခါ ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ဟူသောစကားလုံးတွင် ပျောက်ဆုံးသွားမည့်အရာမဟုတ်သော အဓိပ္ပါယ်၏အရိပ်လက္ခဏာရှိသည်” ဟုဆိုထားပါသည်။ (George Smeaton, The Doctrine of the Holy Spirit, ၁၈၈၂၊ The Banner of Truth မှ ပြန်လည်ထုတ်ဝေသည်၊ ၁၉၇၄၊ စာ-၂၈)တမန်တော်တို့၏အသင်းတော်များကလည်း ဝိညာဉ်တော်ထပ်မံသွန်းလောင်းခြင်းကို ခံစားခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ပေးရန်များစွာရှိပေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် နိူးထမှုသုံးခုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးသူဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Iain H. Murray ၏စကားကို အပြည့်အဝထောက်ခံ ထားပါသည်။ “နိူးထမှုများကိုမြင်တွေ့ခြင်းသည် အရင်ကမဖြစ်ဘူးသောအရာပေးထားခြင်းအ ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။” ( ထပ်၍၊ စာ-၂၂) မြောက်အိုင်ယာလန်နိူင်ငံ၊ ယူစတာတွင် ၁၈၅၉ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွါးသည် နိူးထမှုကို တွေ့မြင်သည့်မျက်မြင်သက်သေတစ်ယောက်အနေဖြင့် ပြောဆိုသည်မှာ “သခင်ဘုရားသည် သူတို့အပေါ်မှုတ်သွင်းတော်မူသကဲ့သို့ ယောက်ျားများ ကခံစာကြရသည်။သူတို့သည် အစအဦးတွင် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းများရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် မျက်ရည်စက်များကို မိုးရေသဖွယ်ချိုးခဲ့ကြပေသည်။ ၎င်းနောက် ဖော်ပြ၍မရနိူင်သောမေတ္တာ ဖြင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးချစ်ကြသည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (William Gibson, The Year of Grace,aHistory of the Ulster Revival of 1859, Elliott, 1860, စာ- ၄၃၉ ) ၁၈၆ဝခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၉ )ရက်နေ့တွင် Rev. D. C. Jones က “ပုံမှန်ထက်လွန်ကဲသော သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏လွှမ်းမိုးမှုထဲသို့ ကျွန်ုပ်တို့အလည်အပတ်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အသင်းတော်လေးက မျှော်လင့်စောင့်မျှော်နေသောအချိန်တွင် လေမုန်တိုင်းငယ်ကဲ့သို့ ရောက်ရှိလာသည်” ဟုဆိုသည်။ (Murray, ထပ်၍၊ စာ- ၂၅ ) ထိုအရာမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် နိူးထမှုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တတိယအကြိမ်မြောက်မြင်တွေ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေသ၍မေ့ပျေက်မရနိူင်လောက်အောင် ရုတ်တရက် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ နိူးထမှုတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာများစွာကို Dr. Lloyd-Jones ၏စကားကို ကိုးကား၍ ပေးလိုပါသည်။
သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်ကြတော့ပေ။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အသက်တာတွင် အမှန်တကယ်ထင်ရှားတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသ ခင်သည် ကြွလာခဲ့ဖူးသကဲ့သို့ သူတို့အလယ်တွင် ဆင်းသက်ခဲ့ပါသည်။ လူတိုင်းသည် သူ၏မျက်မှောက်တော်နှင့် ဘုန်းတော်ကို ထိတွေ့ခဲ့ကြ သည်။ ( နိူးထမှု၊ စာ-၂၀၄ )
အသင်းတော်အား ဤအရာ၏အကျိုးဆက်တစ်ခုအနေဖြင့် သမ္မာတရား နှင့်ဆိုင်သောစိတ်ချမှုကို ပေးတော်မူသည်။ (ထပ်၍ )
အသင်းတော်သည် ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်ပြည့်လျှံလျက်ရှိသည်။ အသင်းတော် တွင်နိူးထမှုကြီးဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ သင်သည် ချီးမွမ်းသီဆိုကြရန် လူတို့ကိုတိုက်တွန်းမည်မဟုတ်၊ ရပ်တန့်ခြင်းကိုပြုနိူင်မည်လည်းမဟုတ်၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်နှင့်ပြည့်လျှံလျက်ရှိကြပါ သည်။ ထိုအရာကို သူတို့မျက်နှာတွင် ထင်ရှားလျက်ရှိပါသည်။ “ပြော၍မ ကုန်ဘဲ ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်လျှံသောပျော်ရွှင်မှုကိုပေးလျက် သူတို့သည် သဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲကြပေသည်။ (ထပ်၍၊ စာ-၂၀၆ )
သင်သည် လူတို့အား ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုလာရန်၊ ချီးမွမ်းလာရန်၊ နှုတ်က ပါတ်တော်ကိုနားထောင်လာရန် တိုက်တွန်းရန်မလိုအပ်ပေ။ သူတို့သည် တစ်ညပြီးတစ်ညရောက်လာပြီး နာရီပေါင်းများစွာနေထိုင်ကြပေမည်။ နံနက်အစောကြီးအချိန်တွင်လည်း ရောက်ရှိလာနိူင်ကြပေသည်။ ဤအ ရာသည် ညစဉ်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နိူင်ပါသည်။ ( ထပ်၍၊ စာ- ၂၀၇ )
(နိူးထမှုတွင်) တူညီသောတရားဒေသနာကို (ဟောပြော) သော်လည်း၊ သူတို့အတွက်မူ တူညီခြင်းမရှိပါ။ ဝိညာဉ်တော်နှင့် တန်ခိုးတော်၏ဖော်ပြ ချက်(ရှိ ) ပါသည်။ (ထပ်၍၊ စာ-၂၀၈ )
သင်၏အသင်းတော်တွင် လူများစေလိုလျှင် နိူးထမှုအတွက်ဆုတောင်းပါ။ အကြောင်းမှာ နိူးထမှုရောက်လာသည်နှင့် လူများစွာလာကြပေမည်။ (ထပ်၍)
သူတရားဒေသနာဟောကြားခြင်းမဆုံးမှီ လူတို့သည်အော်ဟစ်၍ “ကျွန်ုပ် တို့အဘယ်အရာကိုလုပ်ရမည်နည်း” ဟုဆိုကြသည်။ သူတို့သည် စိတ်နှလုံးတွင် ဝမ်းနည်းလျက် အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းတွင် ခံစားနေကြ သည်။ (ထပ်၍၊ စာ- ၂၀၉ )
နိူးထမှုကျရောက်လာသည့်အချိန်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်အတွင် မေးခွန်း သက်သက်မဟုတ်ပါ။ နက်ရှိုင်းသောနောင်တတရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်နိူးထခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ လူတို့သည် ဘ၀ဟောင်းကိုစွန့်၍ ဘဝသစ်ကိုအစပြုကြပါသည်။ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုဖတ်ရှုပါ။ အချက် အလက်များရှိပါသည်။ အယူအဆများမဟုတ်ပါ။ သီအိုရီလည်းမဟုတ်ပါ။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်သောအရာများသာဖြစ်ပါသည်။ ( ထပ်၍၊ စာ-၂၀၉ )
ပြောင်းလဲသောသူများသည် အသင်းတော်နှင့်ပေါင်းစည်းလာကြသည်။ ဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ကိုစတင်သည့် နည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေသောနည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အရမ်းလိုအပ်နေသောအချိန်မဟုတ်ပေဘူးလား။ ကောင်းပြီ၊ ထိုအရာကို သင်ယုံကြည်လက်ခံမှုရှိလျှင် ဘုရားသခင်ထံပါးသို့ မခြားမလပ်ဆု တောင်းပါ။ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုင်းကို ရပ်ဆိုင်းပြီး စောင့်မျှော်ရုံ သက်သက်ဟု ကျွန်ုပ်မဆိုလိုပါ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ သင်လုပ်ဆောင်နေ သောအရာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာ နိူးထမှုအတွက် အချိန်သီးသန့်ထားဆုတောင်းပါ။ အခြားအချိန်ထက်များ စွာအချိန်ရှိသည်ကို သတိပြုပါ။ အကြောင်းမှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် တန်ခိုးအားဖြင့်ဆင်းသက်လာသောအခါ၊ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ် သို့မဟုတ် တစ်ရာထက် တစ်နာရီအတွင်း များစွာဖြစ်ပွါးလိမ့်မည်။ ထိုအရာမှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုး၊ ပင်္တေကုတ္တိနေ့၏အဓိ ပ္ပါယ်ပင်ဖြစ်သည်။ သနားခြင်းကရုဏာရှိရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကို တဖန်သွန်းလောင်းရန် ဘုရားသခင်အားဆု တောင်းကြပါ။ ( ထပ်၍၊ စာ- ၂၁၀-၂၁၁ )
ကျေးဇူးပြု၍မတ်တပ်ရပ်ပြီး သီချင်းနံပါတ် ၇ ရှိ “ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်သောယေရှု” သီချင်းကို ကျူးဧကြပါစို့။ ချားလ်ဝယ်စလီရေးစပ်ထားသည် ပထမဆုံးနိူးထမှုကြီး၏ကြီးမားပြီး လေးစားထိုက်သော ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
စမ်းရေများယိုကျစီးဆင်ချိန် ၊ မုန်တိုင်းများထန်ချိန်ခါ
ခရစ်တော်ဘုရား ကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏၊ ကျွန်ုပ်ရှာတွေ့သမျှအရာထက်မက
ကိုယ်တော်သည် အသက်စမ်းရေတွင်း၊ အခမဲ့ကျွန်ုပ်ရယူရာ
ကျွန်ုပ်နှလုံးတွင် ရှင်းလင်းမှုကိုပေး၊ ထာဝရကာလတိုင်အောင်။
( “ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်သောယေရှု”၊ ချားလ်ဝယ်စလီ၊ ၁၇၀၇-၁၇၈၈ ရေးစပ်သည်။ )
သင်သည်ခရစ်တော်ထံပါးသို့ချဉ်းကပ်လာရန်ဆုတောင်းပါ၏။ ချားလ်ဝယ်စလီပြောဆိုသကဲ့သို့ ယေရှုသည် သင်၏ဝိညာဉ်ကိုချစ်တော်မူသည်။ သူသည် သင်၏အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ အပြစ်အလုံးစုံမှ သင့်ကိုဆေးကြောရန် တန်ဖိုး မဖြတ်နိူင်သောအသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းခဲ့သည်။ သူသည် သင့်အား ထာဝရအသက်ကို ပေးရန် ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ထံပါးသို့လာ၍ ယုံကြည်ကိုးစားပါ။
(“ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသာယုံကြည်”၊ John. H. Stockton ၁၈၁၃-၁၈၇၇ ရေးစပ်သည်။ )
Dr. Chan ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆုတောင်းဦးဆောင်ပါ။ အာမင်……..။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ ၁တိ ၁း ၁၂-၁၆
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။
“ကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်သာ”၊ Fanny J. Crosby, ၁၈၂၀-၁၉၁၅ ရေးစပ်သည်။ )